Hey Twitter, nanandrana doka aho ary ity no nitranga | Martech Zone
Hey Twitter, nanandrana doka aho ary ity no nitranga
Wednesday, May 18, 2016 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Namaky hevitra maro samihafa momba ny Doka Twitter aho. Tsy nampiasa izany ny tenako, nieritreritra aho fa mety mendrika ny hotifirina. Te hisarika olona bebe kokoa amin'ny kaonty Twitter Technology Technology aho ary tiako hojerena raha hanampy ny doka sasany. Mety tsy hitako izay.
Hey @TwitterAds, nanandrana nandany vola taminao aho fa tsy namela ahy ianao
Nizaha tamim-pitandremana ireo safidy fanivanana aho mba hampihenana ny mpihaino ahy. Nisafidy ny Marketing ho sokajy iray aho, nametraka teny lakile vitsivitsy avy amin'ny sokajy ho lasibatra, ary nanolotra kaonty am-polony ampolony ho an'ny mpivady aza mba hanandrana hisarika ny mpanaraka azy ireo ihany koa.
Rehefa nahavita ny lasibatra aho dia nomena ahy ny safidy hisafidy iray amin'ireo Tweet-ko, na hanangana ny ahy manokana. Nisafidy ny hanao ny ahy manokana aho. Averina… Nandany fotoana be aho tamin'ny fanamboarana hafatra mba hizaha toetra sary tsara ho azy.
Ary avy eo nanandrana namoaka ny Twitter Card aho… jereo ny lesoka:
Tsy misy olana hoy aho anakampo. Hitako fa misy bokotra mitahiry hamonjy ny fampielezan-kevitrao eo amin'ny ankavanana ambony. Ka, tsindrio ny tahiry ary… jereo ny lesoka:
Tsy hitako izay hatao izao. Tsy afaka mamonjy ny asa rehetra nataoko nikendrena ny fanentanana ary tsy afaka mamonjy ny asa rehetra nataoko tamin'ny famoronana.
Tags: Twittertsy mahomby ny doka twitterdoka amin'ny twitterdokambarotra twittertsy mahomby ny famoronana twittertwitter tsy mahomby
Douglas Karr Wednesday, May 18, 2016 Saturday, February 13, 2021
gShift: fandinihana tranga iray amin'ny fomba fanao tsara indrindra SaaS Onboarding
Ny zava-misy mitombo sy virtoaly dia tsy maintsy ilaina amin'ny varotra
Amanda Webb (@Spiderworking)
May 20, 2016 amin'ny 3: 33 AM
You are not alone! Manao doka Twitter aho, indraindray ho an'ny tenako, indrindra ho an'ny mpanjifa ary tena sahirana tokoa. Efa fantatra aho fa mandehandeha amin'ny fahatezerana tsindraindray. Tena mila manamboatra izany izy ireo raha te hahazo vola.